Nibuliso! Ukusuka e-Fort Worth, eTexas
umbuzo Nibuliso! Ukusuka e-Fort Worth, eTexas
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #867 by umgcini
Ndandivuyela ukufumana le forum. Ndiza kuhamba ngeFSX iminyaka kwaye ndithenga i-P3D v4. Ndizama ukulanda iifayile ezimbalwa ngoko ndenze i-akhawunti yeJumbo. Ndineengxaki ukufumana ukukhuphela ukuqala. Ifowuni yokukhuphela ibonakala ize ihambe ngaphandle kokwenza nantoni na. Ndiqhuba i-Windows 10 kunye nazo zonke izibuyekezo zakamuva.
Nawaphi na amacebiso aya kuxabiswa kakhulu. Uxolo malunga nemibuzo yokuqala.
Ixesha ukwenza page: 0.164 imizuzwana